> Resource > Ladnaansho > Sida loo soo ceshano tirtiray Pictures ka BlackBerry qalooca 8530/9360/9330
Ma suurogalbaa in dib u soo ceshano sawirada tirtiray ka BlackBerry qalooca?
Jawaabtu waa HAA. Guud ahaan, sawiro aad qabtay telefoonka ayaa la badbaadiyey on kaadhka xusuusta. Marka aad tirtirto sawiro, aad si dhab ah uma iyaga weligood masixi, laakiin u fiirso oo keliya sida aan waxtar lahayn oo waxaan ka dhigi aan la arki karin. Meeshu in kuwa photos've qaaday in ka badan waxa lagu calaamadiyaa sida isticmaali karo for files cusub. Marka aad ku badbaadi sawiro cusub ama faylasha kale halkaas joogo, sawiro hore la overwritten doona kuwo cusub oo aadan dib u heli kartaa mar dambe. Sidaa darteed, wax ugu horeysay hore, ay tahay in aad si fiican aad telefoon ama kaarka haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado sawirada tirtiray ka BlackBerry qalooca 8530, 9360, 9330, iwm
Si aad u soo kabsado photos lumay ka BlackBerry qalooca si adag sida aad u malaynayso ma aha. Dabcan, ma waxaad ku dhammayn kartaa dhashay daranyihiin. Ka hor inta aadan wax ka qaban, aad u hesho barnaamijka sawir BlackBerry qalooca ah, kuwaas oo sameyn kartaa wax badan oo aad u. Haddii aad qabto wax fikrad ah kama ku saabsan, waxaa jooga talo kuwa is-hoosaysiiya, Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Labada of software si buuxda la isku halayn karo oo xirfadle ah. Waxay kaa caawin karaan in aad ka soo kabsado photos tirtiray iyo formatted, video iyo files audio ka dhammaan noocyada kala duwan ee taleefannada gacanta Blackberry, iyo sidoo kale telefoonada mobile kale sida HTC, Samsung, Motorola, Nokia, LG iyo in ka badan.
Download version maxkamad free of this BlackBerry qalooca software kabashada sawirka hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka qalooca BlackBerry
Step1. Burcad barnaamijka BlackBerry qalooca kabashada sawir
Marka hore, xirmaan telefoonka qallooc BlackBerry in computer iyo xaqiijin waxaa lagu ogaan karaa. Haddii aan, waa inuu jiraa karaa magdhow jirka, oo aad u baahan tahay inaan ku saxno hor fulinaya kabashada sawir. Markaas abuurtaan barnaamijka aad ku rakiban kombiyuutarka, oo guji "Start" in interface aasaasiga ah si ay u bilaabaan soo kabashada qalooca sawir BlackBerry.
Step2. Sawirka files tirtiray aad BlackBerry Cruve
Haddii aad telefoonka la ogaado, waxa aad ka arki kartaa in interface ee soo socda. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si aad u hesho files lumay ee aad taleefan.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada tirtiray ka qalooca Blackberry
Scan ka dib, aad mid mid ugu horeysay ku eegaan karo photos kuwa. Fiiri kuwa aad rabto in aad soo kabsado oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday on xariiqa qallooca BlackBerry ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada sawir Blackberry qalooca
MBR Recovery: Sida loo dayactir MBR Dhibaatooyinka